CeleLove - Page 449 of 453 - Welcome From Cele Love
November 27, 2018 Cele Love 0
ချစ်သမီးကြီ့းသို့ သမီး… သမီးကို သူဆင်းရဲမယူနဲ့လို့အဖေ ဘာကြောင့်ပြောရသလဲ? အဲဒီနေ့က သမီးက သမီးချစ်သူကိုအိမ်ခေါ်လာပြီး “အဖေ.. ဒါ သမီးချစ်သူ သမီး သူနဲ့လက်ထပ်မယ်” လို့ ပြောခဲ့တယ်နော်! နောက်တော့ သမီးကို အဲဒီလူနဲ့သဘောမတူနိုင်ဘူးလို့ အဖေပြောခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်လဲလို့ သမီးမေးတော့ “ဆင်းရဲလို့” လို့ အဖေဖြေတယ်။ အဲဒီတုန်းက […]
ပြည်သူ့အချစ်တော် မင်းသမီးချောလေးတစ်ဦးဖြစ်သလို တိုင်းရင်းသူလေးဖြစ်တဲ့ သက်မွန်မြင့်ကတော့ ပီပြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်နိုင်မှုတွေအပြင် ရိုးသားပွင့်လင်းပြီး ဟန်ဆောင်မှုကင်းတဲ့ အပြုအမူလေးတွေကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေက အမြဲအားပေးချစ်ခင်နေကြရတာပါနော်….။ အခုတစ်ခါမှာလည်း ဘုရားပေါ်မှာ တံမြက်စည်းလှည်းကုသိုလ်ယူရင်း သူငယ်ချင်းတွေက ဝိုင်းစနောက်ကြလို့ ကလေးတစ်ယောက်လို ချစ်စရာကောင်းလောက်အောင် ပြန်ပြီးရန်တွေ့ခဲ့ပါသေးတယ်..။ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့က အခြားမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေအပြင် အနုပညာရှင်ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေနဲ့အတူ ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ ဘုရားရင်ပြင်တော်သန့်ရှင်းရေးလုပ်အားပေး တံမြက်စည်းလှည်းပြီးစုပေါင်းကုသိုလ်ယူကြရင်း […]
သင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးမှာ ဒီလိုခံစားချက်မျိုးတွေ ပိုင်ဆိုင်နေပြီဆိုရင် ဘယ်တော့မှ လမ်းခွဲဖြစ်တော့မှာ မဟုတ်
ချစ်သူစုံတွဲတွေ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ချစ်ကြတယ်ဆိုတာ ကွဲပြားမှု၊ ကွာခြားမှုလေးတွေတော့ ရှိနေတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်ကို ချစ်ခင်စုံမက်တဲ့အတွဲတွေ ဆိုရင်တော့ ခုပြောပြပေးမယ့် အချက်ကလေးတွေ ကို သေချာခံစားနေရကြရပြီး ငါတို့ဘယ်တော့မှ လမ်းခွဲဖြစ်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ စိတ်ကကြိုသိနေပါတယ်။ အဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုလေးတွေက ဘာတွေများဖြစ်မလဲဆိုတော့ ၁။သူ့ထက်ကောင်းတဲ့သူ ရှိပါ့ဦးမလားလို့ တွေးမိခြင်း။ ၂။ကိုယ်ကအီစီကလီ လုပ်တတ်တဲ့ လူမျိုးဆိုရင်တောင် […]
ဦးနှောက်မကောင်းတဲ့သူတွေကသာ ဖောက်ပြန်တတ်လေ့ရှိကြောင်း သုတေသီတွေက လေ့လာ တွေ့ရှိချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ဇနီးသည်တွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ လိမ်လည်ပြီး သစ္စာဖောက် တတ်တဲ့သူတွေနဲ့ ခိုးဖွက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်တတ်တဲ့ ခင်ပွန်းသည်က ဥာဏ်ရည်အဆင့်အတန်း နိမ့်ကျပြီး၊ ဦးနှောက်စွမ်းဆောာင်ရည်နိမ့်ပါးတတ်သူတွေဖြစ်ကြောင်း လန်ဒန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်က ဒေါက်တာ ဆက်တိုရှီ ကန်နာဇာဝါရဲ့ လေ့လာသုတေသနပြုအချက်အလက်တွေအရ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတရ် ။ ဆိုရှယ်နဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ […]
Taki Taki ကို သူမတူတဲ့ပုံစံနဲ့ လက်စွမ်းပြကခဲ့ကြတဲ့ သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်
November 26, 2018 Cele Love 0
Ranz Kyle နဲ့ Niana တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကတော့ လူမှုကွန်ယက်တစ်ခွင်မှာ လူကြိုက်များလှတဲ့ Social Media Stars မောင်နှမနှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်! သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်တင်ပေးလာတဲ့ အကဗီဒီယိုလေးတွေဟာဆိုရင်လည်း လူကြိုက်များလှသလို သူတို့ရဲ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကတော့ မချီးကျူးဘဲမနေနိုင်လောက်အောင် ကောင်းမွန်လှသူလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အကဗီဒီယိုလေးမတင်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကတော့ ဒီတစ်ခေါက်မှာဆိုရင် Taki Taki သီချင်းလေးနဲ့ သူတို့ကထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုတင်ပေးလာခဲ့ပါတယ် ။ ဒီသီချင်းလေးကလည်း […]
“ ဆရာဝန်ဘဝကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာလှည့်ကာ သာသနာပြုနေတဲ့ ဆရာလေး ဒေါ်ကမလဥာဏီ ” နောက်ဆုံးနှစ် အပိုင်း(ခ)ဆေးကျောင်းသူဘဝမှာသူမနဲ့သိတဲ့ ဆရာဆရာမတွေ ကျောင်းနေဘက်သူငယ်ချင်းတွေဟာမျက်စိရှေ့မှာတင် မမျှော်လင့်ပဲမတော်တဆ ဆုံးပါးသွားတာတွေ ကြည့်ရင်းနဲ့ သံဝေဂရပြီး သံသရာအတွက် အကောင်းဆုံးလမ်းကိုမိဘတွေတားနေတဲ့ကြားက ရွေးချယ်ခဲ့တာပါတဲ့..ဆယ်တန်းတုန်းကလည်း ကျူရှင်လုံးဝမယူပဲနဲ့ ၆ဘာသာဂုဏ်ထူးရခဲ့သူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်..ဆရာလေးဟာ ဓမ္မာစရိယအောင်ခဲ့ပြီးရွှေတောင်ကုန်းသာသနာ့ရိပ်သာမှာလည်း တရားအားထုတ်ခဲ့ပါတယ်..ယခုလက်ရှိမှာတော့ ကမ္ဘာလှည့်ကာ သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကို […]
ရထားပေါ်မှာ ရဲမေမှန်းမသိဘဲ ပွတ်သပ်ကျီစယ်မိတဲ့အမျိုးသား အချုပ်ခန်းနဲ့ညား…. ယာဉ်တွေရထားတွေပေါ်မှာ အမျိုးသမီးတွေ လိင်ပိုင်ဆိုင်ရာ စော်ကားခံရမှုတွေဟာ မျက်မှောက်ကာလအထိ တည်ရှိနေဆဲ လူမဆန်မှုကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးစနိုင်ငံတွေသာမက၊ ခေတ်မီလှပါပြီဆိုတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေမှာတောင် ပြည်သူပြည်သားတွေဟာ Public Transport ကို အားကိုးအားထားပြုနေရဆဲဖြစ်ပြီး၊ အလုပ်သွားအလုပ်ပြန် လူကြပ်ချိန်တွေမှာ ဒီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံရမှုတွေ အများဆုံးဖြစ်နေဆဲပါ […]
စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာတင် ကြည့်ရှူသူ သိန်းနဲ့ချီရရှိခဲ့တဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်နဲ့ နေခြည်ဦးတို့ ရန်သူ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ Official Teaser သီချင်း
နာမည်ကျော် သရုပ်ဆောင်အနုပညာရှင်တွေဖြစ်သလို ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်တွေဖြစ်ကြတဲ့ မင်းသားနေမင်း၊ မင်းသမီးချောလေး ဝတ်မှုံရွှေရည်နဲ့ နေခြည်ဦးတို့ရဲ့ “ရန်သူ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကတော့ မကြာခင် ပရိသတ်တွေရှေ့ကို ရောက်ရှိလာတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်….. “ရန်သူ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကတော့ ဇာတ်ကားမထွက်ခင်တကည်းက ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုတွေကို အများဆုံးနဲ့ အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး တစ်ကားဆိုလည်း မမှားပါဘူး ။ […]
HD ဆိုတဲ့ ကိစ္စ ဇေရဲထက် ပေါက်ကွဲပြီ
HD18++ခွီးးးးးး လာပါအိမ်မှားးးးကြမ်းရုံတင်မကဘူး အိမ်ပါယိုင်သွားစေရမယ်းးဟီးးးးးး အမွှေပေါ့းးးးးလူတွေရယ် ခက်တယ်လို့မပြောချင်ဘူး ယုတ်မာတယ်လို့ပဲပြောပါရစေးးး အခုချိန်ထိ မရပ်သေးဘူးနော်တိုက်တာ ခိုက်တာ ယုတ်မာတာတွေးးမလိုတမာတွေရယ်…. သေရင် အာ့စိတ်နဲ့မသေနဲ့ ပြိတ္တာဖြစ်နေမယ်းးးပုံနဲ့တကွချပြတာသိစေချင်လို့ပါးးးးအောက်မှာ လင့်ခ်ပါနေတာတောင် ယုံတဲ့လူကယုံနေကြတယ်နော်။ Zay Ye Htet ======= HD18++ခှီးးးးးး လာပါအိမျမှားးးးကွမျးရုံတငျမကဘူး အိမျပါယိုငျသှားစရေမယျးးဟီးးးးးး အမှပေေါ့းးးးးလူတှရေယျ ခကျတယျလို့မပွောခငျြဘူး […]
သမီးလေးရဲ့ ၁၆ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးမှာ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ခိုင်သင်းကြည်
နိုင်ငံကျော်သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချော ခိုင်သင်းကြည် ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်အားပေးရတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။ သူမ က ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပိုင်နိုင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်စွာ သရုပ်ဆောင် နိုင်တာကြောင့် သူမကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားသူပါ။ ခိုင်သင်းကြည်က ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့ သမီးလေး စံထိပ်ထားရဲ့ ၁၆ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးမှာ သမီးလေးကို မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် […]